के केटीहरू हाँस्नु नै फस्नु हो? :: Setopati
निरू त्रिपाठी असोज २३
मानिसहरुले जीवनमा सुन्दर मानिएको अनुभवमध्ये यौनसम्पर्क वा 'लभ मेकिङ' पनि हो। हिन्दु ग्रन्थमा मात्रै होइन संसारका अरू धर्म ग्रन्थ र किताबमा पनि यौनका कुरालाई विशिष्ट स्थान दिइएको छ। र, सुन्दर ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको छ।
मनमस्तिष्क र शरीरमा उब्जेको यौन तीव्रता रोक्न नसकेर हुने घटना होइन, बलात्कार। रक्सीको नशा र कुनै बेहोस हालतमा जबर्जस्ती गर्न मन लाग्ने दीर्घरोग पनि होइन बलात्कार। कोही अर्ध वा पूरै नग्न महिला-पुरुषलाई देख्ने बित्तिक्कै निस्कने 'सेक्स इमोसन' पनि होइन बलात्कार।
यदि मानिसले चाह्यो भने यो तुच्छ मनसाय सधैभरी बाँधेर राख्न पनि सक्छ। चाह्यो भने यो दुर्घटना नगराउन पनि सकिन्छ। बिडम्वना, बलात्कारीहरू बलात्कार गर्नुलाई आफ्नो एउटा शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिन्छन्। एउटा निहत्था व्यक्तिलाई बलात्कार गर्दा आफू विजेता भइने भ्रम पाल्छन्। अनि यही भम्र पाल्दै बलात्कारीहरू गल्ली गल्लीमा दिनरात छाती फुलाएर 'भलादमी' को मुकुट लगाएर हिँड्छन्।
सँगै सबैले बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा, कहिलेकाहीँ दुई व्यक्तिबीच आपसी समझदारीमा सही र सुरक्षित ढंगले यौनसम्पर्क वा 'लभ मेकिङ' हुँदै गर्दा पनि त्यहाँ एक 'पार्टनर' बलात्कृत हुन सक्छ। यस्तो पनि हुन सक्छ र? भन्ने जमात समाजमा टन्नै होलान्। तर यो सबैले मनन गर्नुपर्ने एउटा गम्भीर विषय हो यो।
श्रीमतीले यौनसम्पर्क क्रममा 'मुड' फेरिएर गर्न चाहिनन् र रोक्न आग्रह गर्दा गर्दै पनि उनलाई श्रीमानले जबर्जस्ती गर्न खोजे भने, श्रीमती श्रीमानबाट बलात्कृत भएको मानिन्छ।
त्यसैगरी यदि यौन पेसामा संलग्न महिलालाई रकम दिएर यौनसम्पर्कका लागि तयार गरिन्छ तर केही कारणवश उनी तयार भइनन् र 'नाइँ' भनिन् भने पनि त्यो उनको अधिकार हुन्छ। उनको निर्णयको आदर गर्नु र मान्नु दोश्रो व्यक्तिको कर्तव्य हो। पैसा दिएको छु, तेरो पेसा हो भनेर उनले स्वीकृति नदिए पनि उनीमाथि जबर्जस्ती गरे त्यो बलात्कार हुन्छ।
यसरी एउटा श्रीमानबाट श्रीमती, प्रेमीबाट प्रेमिका, एउटा 'सेक्सुअल पार्टनर' र एउटा ग्राहकबाट यौनकर्मीको बलात्कार हुन सक्छ। कयौंले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा यौनसम्पर्कका नाममा धेरै महिलालाई बलात्कार गरेका छन्। विभिन्न कारणवश महिलाहरूले खुलेर यिनीहरूको विरोध गर्न सक्दैनन्।
केटा बारम्बार भनिरहेका थिए, 'हामी दुवैको मन्जुरीमै किस र सेक्स भएको हो। मैले बलात्कार गरेको होइन।'
स्वीडेनकी केटीको एउटै भनाइ थियो, 'केटाले मसँग जबर्जस्ती सेक्स गरेको हो।'
सरर घटनाक्रम हेर्दा उनीहरू एउटै क्याफेमा केही समयदेखि सँगै काम गरिरहेका रहेछन्। छोटो समयमै उनीहरू 'राम्रो साथी' बनेछन्। जुन दिन घटना भयो, त्यो दिन दुवैले 'पब' मा गएर मदिरापान गरेछन्। लगत्तै उनीहरूको सहमतिमै चुम्बन भएको रहेछ।
'तर किस हुँदैमा मैले सेक्सका लागि स्वीकृति दिएको थिइनँ' भनेर उनले तर्क दिइन्।
अदालतमा केटीपक्ष वकिलले पनि यही तर्कमा जोड दिए र भने, 'किस गर्दैमा सेक्स अपिल भएको हुँदैन र उनी सेक्सका लागि रेडी छन् भनेर बुझ्नु पनि गलत हो।'
धेरै पुरुषहरू 'मौनं स्वीकृतिः लक्षणम्' अर्थात् मौनता सहमतिको सूचक हो भन्दै महिला मेरो प्रस्तावमा राजी भईन् भन्ठान्छन्।
'साबालकहरू सहमतिमा इन्जोय गर्ने अनि कुरा नमिलेपछि रेपको मुद्दा लगाइदिने? आज बिहे गर्ने, भोलि अंश मुद्दा दायर गर्ने अनि पर्सि सम्बन्ध विच्छेद गर्न मिल्छ?' बिडारीको भनाइ हो यो।
माननीयज्यूलाई सोध्छु, 'कहिल्यै सोच्नुभएको छ, यत्तिका वर्ष आफूलाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई बारम्बार आफ्नै आँखाअगाडि देखिरहनुपर्ने अनि अपराधी खुलेआम हिडिरहँदा उनको मनमा कति विपत्ति पर्थ्यो होला?' उनमा कति मानसिक आघातप पुग्थ्यो होला? अनि यही हालतमा बल र हिम्मt जुटाएर तपाईं सामु न्याय माग्न आउँछिन् भने तपाईंले त्यसको अपहेलना गर्न मिल्छ?
कानुन पेसा अँगालेका तपाईंले त यसो भन्नुहुन्छ भने हिजो जंगलमा उधूम मच्चाएर आउनुभएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अरू मुलुक हेरी हाम्रो देशमा बलात्कार सामान्य हो भन्दा केही आश्चर्य नै लागेन।'
गृहमन्त्रीले 'गृह' मा बढेका यस्ता घटना रोक्नु त कहाँ, झन् सामान्य विचार दिएर अपराधलाई हौसला दिएका छन्।
पछिल्लो समय नेताहरूले बलात्कार जस्तो गम्भीर कुरालाई एकदमै हल्का लिएको देख्दा यौन शिक्षा एउटा बलात्कारीलाई भन्दा पनि पुरुष नेतालाई चाहिएको देखियो। यदि उनीहरूले बलात्कार र यौनसम्पर्कको सही अर्थ र उद्देश्य बुझे भने सायद बलात्कारलाई कहिल्यै दुई व्यक्ति बीचको 'इन्जोय' भन्दैनन् होला।